Madaxweyne Geelle: “waxan horseed ka nahay hana-qaadka iyo kala-faa’ideysiga ganacsiga” | The Warsan The Warsan
by nur August 11, 2018 0805
Adanaha markii Alle abuuray, qaar dadkiisa ka og, kuna dhiirrada inuu wajaho jid-gooyada. Hoggaaminta mida, waxa uu Alla siiyey hibo dabiici ah, oo ﬁican waxa haleela, oo Alla waafajiyaa dad kooban, iyaguna dheeri ku ah garashadiisa. Hibadaas, kuwa ugu dadkooda ayey uga faa’ideeyaan.
anfaca badan, waxay khubarrada cilmi-nafsigu Dalka Jabuuti, oo ku yaal mid ka mida marinnada ganac ugu horreysiiyaan haggaaminta ﬁican. Hoggaaminta ﬁicani, siga adduunka kuwa ugu mashquulka badan, ayaa bishii waxa saameyn ballaaran ku yeelataa nolosha Aadane Luulyo 4dii gardaadiyey wejigii ugu horreeyey Aagga badan, oo meel ku wada nool. Hoggaamiyaha saameynta ganacsiga canshuurta ka caaggan, oo ah ka ugu weyn mugga le, lihi, waa ka dhisa waa cusub, oddorosa yoolka Afrika. Xaﬂadda gardaadinta, waxa goob ahaa madax.
Dekadda Dooraale, oo ka mida dhowrka dekadood ee Jabuuti leedahay
weynayaal, wasiirro kowaadyo ka socday Afrika, Tujaar Aasiyaan iyo Afrikaan ah iyo madax Bankiyeedyo caalami ah. Mashruuca, oo lagu sheegay, inay ku baxday 370 milyan
oo	doolar kuna fadhiya dhul baaxaddiisu dhan tahay 240 hektar, waa mashruuc ganacsi oo mar la hel ah.
Aaggan caalamiga ah ee ganacsiga, waxa uu calanka u sidaa mashaariic doora oo dalka ka hirgalayey sannadadii na dhaafay, ku talagalkuna yahay in Jabuuti ku xoojiso booska ay ku leedahay ganacsiga dunida. Mashruuca, waxa laga filayaa, inuu saameyn ballaaran ku yeesho koboca dhaqaalaha Jabuuti. Dakhliga gudaha, waxa uu ku biirin doona 200 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Marka la ballariyo, sida ku jirta qorsha horumarineed ee 2030ka iyo 2040ka dhexdiisa, waxa uu dhakhliga ku kordhin doona 2.5 -4 bilyan doolar.
Mashruucu, waxa uu abuuri doonaa 12,000 oo shaqo, mustaqbal kana 350,000 shaqo oo ay ka faa’ideysan doon-aan kumayaal shaqa- doona, oo Jabuutiyaan. Gobolka
Madaxweynaha Somaaliya ayaa ka mid ahaa marti
sharafkii gardaadiyey mashruuca
waxay u ahaan doontaa goob ganacsiga si xor leysugu weydaarsado, oo an laheyn caqado jid-gooyo ku noqda dhaqdhaqaaqa iyo is-dhexgalka ganacsiga. Sidoo kale, waxay ahaan doontaa, suuq lagu kala iibsado badeeca-daha, maadaama alaabo noocyo badan leh lagu dejiyo. Waxay suuq u noqon doontaa, ganacsatada caalamiga ah ee alaabta iibiya iyo kuwa iibsada, ee qaarrada Aasiya iyo Afrika.
Faa’idoonka Uu Ku Sido Aaggan Suuqa Xorta Ah Marka hore, waxa diyaara 4 dekadood, oo mid walba
wax gaara qaabilsan tahay, una diyaara inay qaabilaan maraakiita waaweyn ee qaada badeecada ku cabbeysan
konteenarrada. Aagga suuqa xorta ah, waxa uu fursad kuu siinayaa inaand badeecadaada ku keysato, ku iibsato ama uga dirato halkii aad la dooneysay. Marka xiga, waa Aag ka caaggan canshuuraha ku waajiba badeecadaha dowliga ah. Haddii aad maalgashato, waxad xaq u yeeelaneysa inaad hesho canshuur-dhaafka:
A)	Hantida- ma-guurtada ah
B)	Waxa ku soo gala
C)	Macaasha aad ka hesho maal-gashiga Waddanna iskama hormari karo, ummadina baahi kama
bixi kadho, hadduusan helin hoggaan fiican, oo hiraal fog le iyo yool barwaaqo oo uu doonayo inuu u raro mujta-maca uu hoggaamiyo. Waa, ka uruuriya dadka kuwa ugu
Waxan horseed ka nahay hana-qaadka iyo kala faa’ideysiga ganacsiga koofur-koofur
fiican, ee la wadaagga mabda’iisa iyo yoolka uu doonayo inuu toogto. Indhahiisu, waa kuwa eega bidhaan-aragga fog, ka dhow kuma qanco. Waa mid kiciya shuruurta dadka, una duwa nolosha horumarkeeda, misana qaabeeya qorshe jaan-go’an oo waqtiyeysan.
Hoggaamiyaha cunsurradaa le, waa ka meel mariya mashaariic horumarineed oo baaxadda le, sida ka Jabu-uti hirgelisay oo kale. Marna kama suurowdeen maskax ku mashquusha “ANIGA” laakin, waxay ka suurowday maskax la gam’i-weyday saboolnnimada ummad Alle mas’uuliyaddooda u xambaariyey. Sifahan waxa iska le, maskaxda ka dambeysa mashruucan (DIFTZ), horseedna ka ah in ganacsiga waddam-ada soo koraaya, gaar ahaan Afrika, la furfuro oo leysku milo, hantida iyo aqoontana la mideeyo.
Madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle, isagoo ka tis-qaadaya halka ay Jabuuti ku taal muhimadda ay ganacsiga dunida u leedahay, hal ma seegin, oo waxa uu ummaddiisa uga faa’ideeyey hantida ay ku dhaadato ee ah dekadaha dalka.
Waxa uu garowsaday, haddaan dekadaha Jabuuti la casriy-eyn, lagu hubeyn qalabka ugu dambeeya ee rarka, dejinta iyo Aag ganacsi xor ah loo qoondeeyo, in Jabuuti saboolku laasimayo. Waa ka Oodda ka rogay, Aag loo qoondeeyey ganacsiga canshuurta ka caagan, bishii Luulyo 4dii, kolkaasoo ay goob joog ahaayeen madaxweynayaal doora oo Afrika ka socday iyo ganacsato caalimi ah, si ay indhahooda uga arkaan inay Jabuuti dhab ka tahay, diyaar u tahay, isuna qaabeysay in dalkeeda laga heli karo wax kasta oo fududeeya ganacsiga caalamiga ah. Ammakaag iyo dhabanna- heys, bey ku aheyd martidii meesha timid, waxa ay indhahoodu arkayeen.
Maaha oo kaliya mashruucan, tasiilaadka Jabuuti u diyaarisay maalgashiga caalamiga ah, ee waxa diyaara, oo la meel mariyey
Madaxweyne Paul Kagame oo khudbaddiisi munaasabada jeedinaya
shuruucdii sahli lahaa maalgashiga iyo tasiilaadka kale ee ganacsi caalami ah daruuri u ah.
Jabuuti, waxay ka mid tahay dalalka naadirka ah, ee oggol inaad faa’idaada toos ula baxdo.
Madaxweynaha, oo furitaankii mashruuca ka hadlay waxa
uu	yidhi; “Waxan horseed ka nahay hana-qaadka iyo kala faa’ideysiga ganacsiga koofur-koofur”(koofur koofur waa oraah taariikh ahaan ay isticmaalaan siyaasad-hagayaasha iyo dhaqaala-yahannada, oo loola jeedo in leys-weeydaarsado kheyraadka, tiknooligiyada iyo ganacsiga ee waddammada soo koraya)
Maalgashiyeyaasha Somaalida Ah
Somaalida in Jabuuti looga sheekeeyo uma baahna, waayoo, waa walaal mar walba dul taagan, dhibtana la qeybsada. Waa tan cotobyo ciidamada Jabuuti ka tirsani ay ka dhinac
dagaalamayaan kuwa Somaalida, waa tan uu madaweynaha Jabuuti uu fagaaraha caalamka uga dodo, hayeeshee, dadka Somaaliyeed, gaar ahaan ganacsata, waxa jira maacluumaad badan oo aayan ka helin ama aayan ka doonanba. Waa fursaha maalgashi ee yaal dalka Jabuuti, oo runtii ee runtii ah qaar xad-dhaafa, Somaaliduna weli aaneyn si fiican ugu baraarugin.
Dalku, waxa uu cagta saaray waddadii horumarka, mashaari-ic horumarineed oo baaxdle ayaa ka socda, oo uu ka mid yahay ka 4tii bishii hore daaha laga rogay. Maalgashiga Somaalida u diyaarka ah, waxa ka mida dhinacyada dhismaha gurya-ha, hoteelada, warshadaha, suuqyada, goobha caruurtu ku ciyaarto iyo qaar kaloo badan.
Gancsatada Somaalida, ee xafladda mashruucan lagu gardaadinayey ka qeyb galay, waxa ka mid ahaa maamulaha sharikadaha Dahabshiil Cabdirashiid Ducaale iyo gabadha Somaaliyeed ee caanka ka ha ganacsiga Bariga Afrika,
gaar ahaan Ugaadha, Amina Xirsi Mooge. Cabdirashiid, oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri; DITFZ, waxay adduunka ku soo haggaamisay Afrika, iyadoo weli suuqgeyn u sameyneysa wax soo saarka Africa iyo khadamaadkeedaba, fureysana ganacsi labada dhinac u kala socda”. Waxa uu ballanqaaday Cabdirashiid in Dhabshiil baankeeda ( East Africa Bank) uu Waxan ka warqabnaa, in Somaalida caalamka meelaha
ay ganacsiga ku leeyhiin ka soo wajahaan khattaro nafeed iyo maaliyadeed. Jabuuti, fursadaha ganacsi ee ku diyaara, waa khatar la’aan 100% -Joogsi. Marna filan meysid inaad la kulanto mushkiladaha joogtada ah ee Somaalida ka soo wajaha dunida inteeda kale. Waa dalkaagii labaad, oo sidaad doonto ugu ganacsan karto, iyadoo cid xageed ka timid ku lihi aaney jirin. Soo bboo-doo, Jabuuti booqo, kana faa’ideyso fursadaha ku sugaya.ay ganacsiga ku leeyhiin ka soo wajahaan khattaro nafeed iyo maaliyadeed. Jabuuti, fursadaha ganacsi ee ku diyaara, waa khatar la’aan 100% -Joogsi. Marna filan meysid inaad la kulanto mushkiladaha joogtada ah ee Somaalida ka soo wajaha dunida inteeda kale. Waa dalkaagii labaad, oo sidaad
fududeyn doono xiriirinta ganacsata iyo bunuugta caalamka. Baahi ayaa loo qabaa inay ganacsatada Somaaliyeed ku biiraan Dahabshiil iyo Salama Africa Bank oo maalgelin ku sameeyey mashaariic badan, gaar ahaan Salama Africa Banka oo dhowr mashruuc ka wadda Jabuuti.
Waxan ka warqabnaa, in Somaalida caalamka meelaha